Paragoay: Fanehoankevitra hafa an’ireo Bilaogera manoloana ny Fandresen’i Lugo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2019 11:40 GMT
Vao haingana izay, voafidy ho Filohan'i Paragoay i Fernando Lugo, ilay eveka Katolika teo aloha nirotsaka avy amin'ny Alianza Patriotica Para el Cambio (Firaisan'ny Tia Tanindrazana ho an'ny Fiovàna), nandritra ny fifidianana natao ny 20 Aprily, izay nahazoany ny 40.8% an'ireo vato. Nanaraka azy i Blanca Ovelar izay nahazo ny 30.8% ary i Lino Oviedo izay nahazo ny 21.9%, namarana izany taty aoriana be i Pedro Fadul miaraka amin'ny 2.3% an'ireo vato. Nandray anjara mavitrika tanatin'ny fifidianana ny olom-pirenena tao Paragoay miaraka amin'ny taham-pandraisana anjara 68% an'ireo olona nizotra tany amin'ny toeram-pifidianana, izay avo raha oharina amin'ireo fifaninanana taloha, rehefa teo amin'ny 30-40% teo no nifidy tanatin'ireo fifidianana teo aloha.
Ny Filoha voafidy Fernando Lugo tao amin'ny Gazety ABC Color. Sary avy amin'ny hetsipanentanan'i Fernando Lugo ary nampiasaina teo ambany fahazoandàlana Creative Commons.
Milaza i Juan Carlos Rojas anatin'ny bilaoginy antsoina hoe Oasis Liberario [es] fa tsy manantena be loatra momba ireo fiovàna vaovao ireo izy: